Ebumnuche. Kedu ihe ọ bụ, otu esi atụ ya na etu ọ dịruru mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị nụtụla banyere ihe dị iche iche nke Ebumnuche mgbe ị na-ekwu okwu banyere osisi. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ bụ ihe a na-ahụ anya mgbe ahịhịa na-efunahụ mmiri site na anụ ahụ ha site na ebumpụta ụwa abụọ na - eme ihe dum: nkụkọ n’otu aka na ọsụsọ na nke ọzọ. Enwere ike ịkọwa Evapotranspiration dị ka nkwonkwo njikọ nke usoro abụọ a n'otu oge.
Na nke a, anyị ga-egosi gị otu usoro a si arụ ọrụ yana mkpa ọ dị na mmiri okirikiri.
1 Gịnị bụ evapotranspiration
2 Ihe atụ na ịba uru
3 Evdị evapotranspiration
4 Mkpa oru ugbo
Gịnị bụ evapotranspiration
Anyị na-amalite site na ịkọwapụta usoro nke ndị anyị na-ekwu nke ọma na-arụ n'otu oge. Usoro mbu bu evaporation. Ọ bụ ihe anụ ahụ na n'egosi mgbanwe nke mmiri site na mmiri na vapo. Nke a na-agụnye usoro sublimation nke na-eme mgbe mmiri dị n'ụdị snow ma ọ bụ ice ma gaa na vepo na-enweghị ịga mmiri mmiri.
Ntutu mmiri na-amalite n’elu ala na ahịhịa ngwa ngwa ọdịda malitere. N'ihi ma ọ̀ bụ okpomoku, ihe anyanwụ na-eme ma ọ bụ ikuku ya, mmiri mmiri mere ka ọ dapụ na-akwụsị. Ebe ọzọ anpo oku di n’elu mmiri dika osimiri, ọdọ, na ọdọ mmiri. Ọ na-esikwa na mmiri na-abanye n'ime ala. Nkechie na-ekpochapukarị site na mpaghara miri emi nke kachasị elu. Nke a bụ mmiri na-adịbeghị anya abanye ma ọ bụ na ebe ọpụpụ.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere usoro igba ajirija. Ọ bụ ndu nke sitere n’okike. Ọ bụ usoro ha si efufu mmiri ma wụsara ya na mbara ikuku. Osisi ndị a na-ebu mmiri site na mgbọrọgwụ si n'ala. A na-eji akụkụ nke mmiri a maka uto ha na ọrụ ha dị mkpa na akụkụ ọzọ ha na-agafe na mbara igwe.
Ihe atụ na ịba uru
Ebe ọ bụ na ihe abụọ a siri ike ịlele iche, ha na-emekọ ọnụ dị ka evapotranspiration. N'ọtụtụ okwu a na-amụ, ịkwesịrị ịma mkpokọta mmiri furu efu na ikuku na usoro nke furu ya enweghị isi. Achọrọ data ndị a iji mee ka mmiri guzozie oke mmiri na-ada n'ihe metụtara nke furu efu. Ihe ga - esi na ya pụta ga - abụ ezigbo net net, ma ọ bụrụ na mmiri na - agbakọ ma ọ bụ na anyị nwere oke akụ, ma ọ bụ na - adịghị mma, ma ọ bụrụ na anyị tufuru mmiri a chịkọbara ma ọ bụ tufuo akụ.
Maka ndị na-amụ ntopute nke mmiri, nhazi mmiri ndị a dị ezigbo mkpa. A na-eleba anya na ọmụmụ ihe ndị a maka ọnụọgụ mmiri mmiri mpaghara. Nke ahụ bụ ịsị, mmiri niile mmiri ozuzo wepụtara site na mmiri nke na-efu site na mkpochapu mmiri, ga-abụ oke mmiri dị na anyị ga-enwe Olee ihe enyemaka. N'ezie, anyị ga-eburu n'uche mmiri mmiri na-abanye n'ime ya dabere na ụdị ala ma ọ bụ ịdị adị nke aquifers.
Evapotranspiration bụ mgbanwe dị mkpa n'ọhịa nke sayensị agronomic. A na-ahụta ya dị ka ihe dị mkpa na-atụle mkpa mmiri nke ihe ọkụkụ nwere ka ha wee nwee ike itolite n'ụzọ ziri ezi. Enwere ọtụtụ usoro mgbakọ na mwepụ iji mata data evapotranspiration dị mkpa na nhazi mmiri.
Ngwongwo ya nke ejiri tụọ ya bụ mm. Iji nye gị echiche, ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ nwere ike ịmịpụ ikuku n'etiti 3 na 4 mm. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na akụkụ ndị a tụrụ atụ hiri nne na ahịhịa, mmadụ nwekwara ike ikwu maka cubic mita kwa hectare ala.
Iji nwee ike ịkọwa ọdịiche nke data ahụ nke ọma na nhazi mmiri, e kewara data evapotranspiration n'ọtụtụ ụzọ. Nke mbu bu enwere ike ịtọpụ (ETP). Ihe omuma a bu ihe gosiputara anyi ihe eweputara site na nkpuru ala ma nkpuru ahihia di nma. Nke ahụ bụ, oke mmiri ga-ekpochapụ ma transpire ma ọ bụrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma maka ya.
N'aka nke ozo anyi nwere ezigbo evapotranspiration (ETR). N'okwu a, anyị na-atụ mmiri ole mmiri na-ebufe na-adabere n'ọnọdụ ndị dị na nke ọ bụla.
Na nkọwa ndị a, ọ pụtara na ETR pere mpe ma ọ bụ hà nhata na ETP. Nke a ga - eme 100% nke oge. Iji maa atụ, n’ọzara, ETP dị ihe dịka 6mm / ụbọchị. Agbanyeghị, ETR bụ efu, n'ihi na enweghị mmiri ị ga-ezere. N'oge ndị ọzọ, ụdị abụọ ahụ ga-abụ otu, ọ bụrụhaala na enyere ọnọdụ kachasị mma ma nwee mkpuchi osisi dị mma.
Ekwesighi ikwuputa na ngbasapu bu ihe na adighi amasi anyi ma oli. Ọ pụtara ịhapụ mmiri mmiri na-enweghị ike iji mee ihe. Anyi aghaghi iburu n'uche na obu otu ihe nke mmiri mmiri na-eme, na kwa, n'agbanyeghi, ihe obula nke kpochapuru ga-akwusi ozo.
Mkpa oru ugbo
Nkọwa niile dị n'elu dị oke mkpa na nghazi akụrụngwa akụrụngwa. Mgbe anyị jiri ụkpụrụ ETP na ETR na hydrology, so a na-eleba ha anya n'ime ngụkọta nke bezin. Ihe ndị a bụ ndị na-egosi oke mmiri furu efu site na ihe butere. Iji lebara anya na mmiri dị n’elu mmiri dị, dị ka ọ na-esite n’ime mmiri, infiltration bụkwa ihe na-ebelata oke mmiri dị.
Mkpa nke evapotranspiration na abawanye mgbe anyi bara n'ime ubi oru ubi. N'okwu ndị a, ọdịiche dị n'etiti ETP na ETR nwere ike ịbụ ụkọ. Na ọrụ ubi a dị iche iche chọrọ ịbụ efu, ebe ọ bụ na ọ ga-egosi na osisi na-enwe mmiri zuru oke mgbe ọ bụla ọ ga-agba ọsụsọ mgbe ọ chọrọ. Ya mere, anyị na-echekwa mmiri mmiri, ma, anyị nwere mbelata nke mmepụta ihe.
A na-akpọ mmiri na-agba mmiri ka ọdịiche dị n'etiti evapotranspiration.
Enwere m olile anya na site na ozi a o doro anya na ọ dị mkpa na uru nke evapotranspiration.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ebumnuche